© 2010 Laza Baleda & The Voangory Attitude Experience L.T.D
Vita soa aman-tsara ny fetin'ny AKAMA tamin'ity taona ity ka faly sy ravo avokoa ireo izay nanatrika satria,sady voky ny kibo no afa-po ny maso sy ny sofina.
Sakafo narahin-kira sy dihy mirindra àry vako-drazana mantsy no nanamarihana ny fotoana. Marina fa fitaizam-panahy amin'ny alàlan'ny evanjely sy ny Baiboly no anjara asan'ny Aumônerie, fa ny fanamafisana ny mahamalagasy dia tsy mba ataony ambanin-javatra mihitsy.Ka izay no tsy ahafoizako azy na dia protestanta aza aho.
Nandrotsirotsy àry nampientanentana tokoa ny nandre ny mozika notendren'i Pita RABESON sy ireo mpiara-milalao aminy. Olona zà-draharaha avokoa na dia tsy matihanina aza ny ankamaroany. Ary ny dihin'ireto ankizy ? Aoka fotsiny! Na teraka taty am-pita aza, dia tsy sarotra amin'izy ireo ny lantsin-tànana sy dihy soroka fa... mandeha ho azy hoy ny fiteny taloha izay.
Ny dihy vako-drazana nataon'ireto tanora sy ireo efa zokinjokiny indray dia toy ny any MAdagasikara mihitsy: tsy nisy adino na ny avy any avaratra na ny avy any atsimo.Ny avy any andrefana sy antsinanana tsy diso anjara rahateo.
Fa ny tena nampihetsi-po indrindra dia ny dihy vako-drazana nataon'ireto relijiozy.
Maromaroa ny toy izany.
Aumônerie catholique malagasy
ALBUM 1 44 photos
ALBUM 2 40 PHOTOS
ALBUM 3 42 PHOTOS
ALBUM 4 48 PHOTOS